Alatsinainy, Septambra 23, 2013 Alahady, Septambra 22, 2013 Douglas Karr
Navoaka i Vibes Mpitantana poketra, vahaolana kitapom-batsy cross-platform, ao anatin'ny sehatr'asa marketing finday Catapult. Ny fahombiazan'ny marketing amin'ny finday dia miankina amin'ny personalization sy ny atiny mavitrika. Mihatsara ny valiny raha misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny zavatra ataon'ny mpampiasa ny tolotra, rehefa ataony izany ary aiza no misy azy ireo. Ny Passbook sy ny Google Wallet Object API dia tafiditra ao anaty Wallet Manager.
Araka ny Mpitantana poketra pejy vokatra:
mamorona - Ampiasao ny fitaovana Wallet Manager hamoronana ny atin'ny kitaponao finday ao anatin'ny minitra vitsy. Tsotra toy ny fisafidianana ny maodely mety ho an'ny fampielezankevitrao ary avy eo mampiasa ny fitaovana fanonanananay mba hisafidianana loko, ampidiro ny sarinao sy ny marikao, soraty amin'ny sehatry ny lahatsoratra sy maro hafa. Tsy misy ny fanaovana kaody, tsy misy fisafotofotoana ary ny fanoloranao kitapom-batsy finday avy hatrany dia velona.
Zarao - Ny Wallet Manager dia mampiasa teknolojia detaption fitaovana Catapult SmartLink, izay ahafahanao mandefa ny fanolorana kitapom-bolanao amin'ny sehatra rehetra - mandefa Passes amin'ny iPhones, Google Wallet Objects amin'ny telefaona Android, ary atiny amin'ny tranonkala finday amin'ny fitaovana hafa.
mitantana - Raha vantany vao notehirizan'ny mpanjifanao ny fanoloranao kitapom-batsy ho an'ny telefaona findainy dia azonao atao ny mampiasa ny Wallet Manager hanavao ny fampandrenesana napetraka sy ireo programa mahatoky. Tsindrio ny fampitana fifandraisana toa ny poketra amin'ny finday handefasana ny fampahatsiahivan'ireo mpanjifanao, mba hamerenanao ireo mbola tsy nanavotra ny mari-pankatoavany ary hanova na hanavao ny tolotra hanehoana ny fisian'ny vokatra.
manatsara - Leverage data sy Analytics, zarao ary ampidiro indray ny mpanjifanao mifototra amin'ny fitondran-tena taloha sy ny safidinao amin'ny finday. Hatsarao ny isa fanavotanao amin'ny fanovana tolotra raha mbola eny an-tsena izy ireo.
ohatra - mahazoa hevi-baovao amin'ny fanentanana amin'ny kitaponao finday. Fandrefesana ny tahan'ny tsindry Click-through, mahazoa fahitana amin'ny atiny voatahiry sy voafafa, sns. Ampiasao ity angona sarobidy ity hanaporofoana ny ROI. Azonao atao koa ny mampifangaro ny data-nao ao amin'ny magazay, ny varotra POS ary ny fanavotana amin'ny Catapult hanakatonana ny loop amin'ny programa findainao.
Tags: catapultgoogle passpoketra finday tafiditraiphone passkitapom-batsy iphonepoketra findayvibescatapult vibesmpitantana kitapom-batsy
Toerana ho any ve ianao? Fivoahana ve? Sa Famantarana fotsiny?
Justintime: Prototypes Web, Mobile ary Tablet manan-karena